Umatshini we-E-Scooter-Abavelisi be-E-Scooter abathengisi, abaXhasi
Izithuthi ezincediswa ngamandla ombane zibhekisa kwisithuthi se-mechatronics esisebenzisa iibhetri njengomthombo wamandla oncedisayo ngesiseko sezithuthi ezincinci eziqhelekileyo kwaye zixhotyiswe ngeemoto, isilawuli, ibhetri, izibambo zokubamba, izibambo zokuqhekeza kunye nezinye izinto ezisebenzayo kunye neenkqubo zezixhobo zokubonisa. Ukutshaja ibhetri ngaphambi kokusetyenziswa.
Amandla angaphezulu, axhotyiswe ngakumbi ngemoto ephuculweyo ye-300W, isithuthuthu sombane sinokufikelela ngokulula kwisantya se-20km / h.
Umgama omde webhetri-36V 7.5aH ibhetri ephezulu yokufikelela inokufikelela kwi-130 yeemayile ngentlawulo nganye.
Ukuhamba ngokutyibilikayo i-JBHZ-01 ine- "deck" ebanzi kwaye isebenzisa izinto ezinkulu ezithambileyo ezingatyibilikiyo ukuphumla naxa uhamba ixesha elide.
Inkqubo ye-brake ezimbini i-JBHZ-01 ineenkqubo ezimbini zokuqhekeza (ngaphambili i-elektroniki yaqhekeza kunye ne-disc brake yangemva). Umsebenzi we-Braking. Inkqubo emibini ibonelela nge-braking ekhuselekileyo nephendulayo nakwizantya eziphezulu.
Khwela ngokukhuselekileyo ebusuku-izibane eziphuculweyo zikhanya ngokuqaqambileyo! Ukongeza, i-JBHZ-01 ikwaxhotyiswe ngezibane zomsila ze-LED kunye nezibane zangaphezulu ezingaphezulu ukuphucula ukhuseleko kunye nokubonakala.
Kukho iqhosha elidityanisiweyo ecaleni kwesiphatho sasekunene, ukuze ukwazi ukulawula ngokulula isithuthuthu ngelixa ukhwele. Bamba isantya sokukhawulezisa kwi-8 Mph (okanye ngokukhawuleza) kwimizuzwana emi-6 ukwenza ulawulo lokuhamba ngenqanawa. Emva kokuva i-beep, i-scooter iya kugcina isantya sayo sangoku.
Ukhuseleko lwaphula kabini
I-disc brake yangemva kunye nokuqhekeka kombane ngasekhohlo kukuvumela ukuba upake kwimizuzwana embalwa. Izibane ezikhanyayo, izibane ezisecaleni eziluhlaza kunye nezibane eziqhekezayo zibonelela ngokhuseleko olongezelelekileyo ebusuku.
Gcina ixesha lolondolozo
Amavili aqinileyo aphambili angama-8.5-intshi kunye nokungatyibiliki abonelela ngokusebenza ngokutyibilikayo; Abaxhasi abasemva kunye noonogada benza ukukhwela kukhuselekile.
Amava angcono okukhwela
I-JBHZ-02 ixhotyiswe nge-Ultra-wide deck, enkulu ngokwaneleyo ukuba ilingane iinyawo zakho, kwaye izinzile ngokwaneleyo ukuba ixhase i-120KG.
I-E-Scooter JBHZ K01
Isakhelo se-aluminium alloy 1.Colorful, yomelele ngakumbi kwaye intle.
Ukubambelela 2.Soft EVA ukubonelela imvakalelo ethambileyo xa uqhuba ixesha elide.
Isihlalo se-3.PU sesikhumba kwisihlalo se-ergonomic egobileyo sokuthintela usana ngasemva.
4.Anti-banxibe ezidanyazayo amavili DB ngaphandle ibhetri.
5.Strong unyawo ukugcina ulungelelwano usana xa iinyawo ukusuka emhlabeni.
I-6.90 yokuguqula uyilo kuthintela ukuwa kosana xa ujika.
Uyilo lonxantathu oluzinzileyo.
Ubungakanani bebhayisikile: 60 * 23 * 48cm; Ubungakanani Ukupakisha: 53 * 17 * 33cm.
9. Ubunzima beNet: 3KG; Ubunzima bobunzima: 3.5KG.
10 Umbala: Ngwevu, Mthubi, Mfusa.
(Iphakheji: 910pcs / 20ft, 1820pcs / 40ft, 2028 / 40hq).